ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုမွမ်းမံနည်း | Androidsis
ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံနည်း
Francisco Ruiz | | အန်းဒရွိုက် Recovery ကို, လဲ tutorial
Android Terminal အချို့အား Android 5.0 Lollipop အသစ်သို့တရားဝင်မွမ်းမံရန်မည်သို့ရှင်းပြရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပြီးပါပြီ။ Cyanogenmod 12 မှပထမဆုံး Roms Alpha. LG G2 မှာဒီလိုမျိုးပဲ သို့မဟုတ်၏ဖြစ်ရပ် Samsung Galaxy S4 GT-I9505 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်လ်.
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် LG က G2ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်သော terminal ဖြစ်သောငါပြောသင့်သည် Rom သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးချွတ်ယွင်းချက်မရှိသလောက်ပင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်သည်အနည်းဆုံးတော့အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည်။ Samsung Galaxy S4 တွင်အရာအားလုံးကိုပြုပြင်ရန်လိုနေသေးသော်လည်းအမှန်တရားမှာ Android Lollipop Rom သည်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ထူးခြားမှုရှိသည်။ ဒီနေ့ပို့စ်မှာမင်းကိုငါလမ်းညွှန်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ် ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အသစ်ဤအရာများမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်များအတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက် Roms Cyanogenmod ၁၂ အောင်မြင်မှုရှိပါစေ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာသည်အလုပ်လုပ်သည်။
မသန်စွမ်း ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံး version သို့ update လုပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal အတွက်၊ သင်၏ပရောဂျက်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုသွားသကဲ့သို့လွယ်ကူသည် TWRP, Philz o CWM။ compressed လုပ်ထားသောဖိုင်ကို ZIP ဖြင့်ကူးယူပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ internal memory ထဲသို့ကူးယူပါ။ Recovery အဟောင်းနှင့် ပြန်လည်၍ စတင်ပါ Wipe မဆိုလုပ်ရန်မလိုဘဲ flash လုပ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ကြိမ်ပေါ်လာသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် mode ကို Reboot options မှ terminal ကို restart လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည် Recovery Mode ထဲဝင်ပါ.
1 TWRP Recovery ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိမည်နည်း။
2 Recovery Philz Touch ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
3 CWM Recovery ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိနိုင်သနည်း။
4 ကျွန်ုပ်၏ Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။
TWRP Recovery ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိမည်နည်း။
La ပြုပြင်ထားသော TWRP Recovery ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း ကျနော်တို့ကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။ ထိုအခါသင်ပြုရန်အားလုံးသည်ထို option ကိုနှိပ်ပါ သင်၏ Device အတွက် TWRP ကိုရယူပါ နှင့် drop-down တွင်သင်၏ terminal ၏ပုံစံကိုရေးပါ:
Recovery Philz Touch ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
Philz Touch Recovery သည် TWRP စာမျက်နှာရှိရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မရှိသောကြောင့်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ ရရန် ၏နောက်ဆုံးထုတ် Recovery Philz Touch ကျနော်တို့ဒီ link ကိုအတူတူရရှိနိုင်အားလုံးမော်ဒယ်များကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်သွားကြသည်။
CWM Recovery ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိနိုင်သနည်း။
ရရ နောက်ဆုံးပေါ် Clockworkmod Recovery ဗားရှင်းငါတို့သာကြွေးတင်မည် ဒီဝဘ်စာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက် နှင့်သဟဇာတဆိပ်ကမ်း၏ကျယ်ပြန့်စာရင်းမှရွေးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။
မသန်စွမ်း ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုနောက်ဆုံး version သို့ update လုပ်ပါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပြုပြင်ထားသော Recovery အဟောင်းမှဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။
download လုပ်ထားသော zip ကို terminal ၏ internal memory ထဲသို့ကူးယူပါ။
ကျနော်တို့ Recovery Mode ကိုမှာ reboot.
ရွေးချယ်မှုမှ Install ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော zip ကိုရွေးပါ ငါတို့မဆိုသုတ်မပါဘဲ flash.
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ reboot သို့မဟုတ် option ကို အဆင့်မြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုပြင်ထားသော Recovery ပေါ် မူတည်၍၊ Recovery Mode ထဲဝင်ပါ.
Terminal ကို restart လုပ်လိုက်ရင် Recovery ထဲကိုထပ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနိုင်မှာပါ ကျနော်တို့ပြီးသားက၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းရှိသည်အဖြစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » အန်းဒရွိုက် Recovery ကို » ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံနည်း
LG G2 အတွက်မည်သည့် rom (သို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာဗားရှင်း) သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်သနည်း။
သငျသညျအကောင်းတစ်စတော့အိတ်ချင်လျှင်ငါနောက်ဆုံးပွင့်လင်းဥရောပတိုက် H သည်ထင်သောနောက်ဆုံး kdz flash ပြီးတော့ root နှင့် voila ။
Recovery မှ kdz zip ဖြင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါမည်။
အခြားအရာတစ်ခု၊ kdz rom သို့မဟုတ် custom rom တစ်ခုခုကိုငါကြိုက်လား (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုငါဂရုစိုက်တာထက်ပို) လား။
အခုငါ Evomagix Android 5.0 aosp ROM နဲ့ကပ်နေတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Stock-ROM ကိုရှာရန်လိုပါက Cloudy G3 ဖြစ်လိမ့်မည်။
download ပြုလုပ်ရန်စာရင်းတွင် twrp သည် lg g2 မပေါ်လာပါ။ ဘယ်ဟာကို download လုပ်သင့်သလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
LG G2 အတွက် TWRP recovery ကိုရှာလို့မရပါ၊ သင်၏ Device အတွက် Get TWRP သည်မတွေ့ရပါ။ မည်သူမဆို ZIP ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသလားသို့မဟုတ်၎င်းကိုကူးယူရန်လင့်ခ်ရှိပါသလား။ ထပ်ဆောင်းပြီးတော့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Carlos BARROSO ဟုသူကပြောသည်
ငါနှင့်အတူတူပါပဲ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ d802 မပေါ်လာပါ
CARLOS BARROSO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
LG Optus G2 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်
မေးခွန်းတစ်ခုကကျွန်ုပ်သည် Philz ထိမှ twrp သို့မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသနည်း။ မင်္ဂလာပါ
မင်္ဂလာပါ၊ recovery ကို update လုပ်တဲ့အခါ၊ ငါပြောပြီး restart လုပ်လိုက်တယ်။ recovery ကိုငါထည့်ချင်တဲ့အခါပျောက်သွားသလိုပဲ။ ငါဘယ်လိုပြန်ထည့်ရမလဲ၊ အခုငါ့မှာ Android 5.0.1? ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ။
TWRP ထည့်သွင်းမှု (install လုပ်ပြီးဖြစ်သော TWRP 2.8.4 နှင့်အထက်လိုအပ်သည်):
download link မှနောက်ဆုံးပေါ် TWRP ပုံရိပ်ဖိုင် (.img) ကို ရယူ၍ TWRP ကို ​​boot လုပ်ပါ။ တပ်ဆင်ပြီးရှာရန်နှင့်ပုံများခလုတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောပုံကိုရှာဖွေပါ။
recovery ကိုရွေးချယ်ပြီး flash.dd သို့တွန်းပါ။ Install Method (Requires Root):
အပေါ်ရှိ download link မှနောက်ဆုံးပုံရိပ်ဖိုင် (.img) ကိုရယူပါ။ ၎င်းကိုသင်၏ / sdcard ဖိုင်တွဲ၏အောက်တွင်ထည့်ပြီး twrp.img ဟုအမည်ပြောင်းပါ။ အောက်ပါ command များကို adb shell သို့မဟုတ် terminal emulator app မှတဆင့် run ပါ။
= if / sdcard / twrp.img = / dev / block / platform / msm_sdcc.1 / by-name / recovery မှ dd လျှင်။
Felipe Escala M က ဟုသူကပြောသည်
TWRP စာမျက်နှာတွင်၎င်းသည် lg g2 ဟုထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ D805 အတွက်မည်သည့် version ကို download ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Felipe Escala M ကိုစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် samsung galaxy s2 i9100 ၏ cwm recovery ကို update လုပ်ချင်တယ်။ နောက်ဆုံး version ကတော့ 4.0.1.5 ။
ငါထည့်သွင်းထားသောအရာကိုကြည့်ပြီး၎င်းသည် v 5.0.2.7 ဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုရှင်းပြပေးနိုင်မလား။
Jesus roa အားပြန်ပြောပါ
Alberto Rosario ဟုသူကပြောသည်
အကူအညီကျွန်ုပ်တွင် galaxy s4 ရှိပါသလား။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်စနစ်၏သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ galaxy လိုဂိုနှင့်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါက kitkat ရှိသည့် android ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်သင့်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ 4.4.2 ကျွန်ုပ်၏နဂါးငွေ့တန်းသည် Sprint s4 L720 ဖြစ်သည်။
alberto rosario အားပြန်ပြောပါ
ငါ reboot ကိုမနှိပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ငါမလုပ်ခဲ့တာလဲ၊ ပြီးတော့ငါအနက်ရောင်ဖန်သားပြင်တစ်ခုရလာတယ်။ ဒီကိစ္စမှာငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါ LG G2 ရှိတယ်
Wi-Fi ပြtroublနာကိုဖြေရှင်းရန်သင်၏စာမျက်နှာ၊ zuk z1 တွင်သင်ရှင်းပြသည့်အတိုင်း cyanogenmod ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။ ပြproblemနာပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်းညအချိန်တွင်မွမ်းမံမှုများမတပ်ဆင်ထားပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား "ပိုင်ရှင်မဲ့တပ်ဆင်မှုအတွက်သဟဇာတဖြစ်သောပြန်လည်ထူထောင်ရေး" တစ်ခုအတွက်တောင်းဆိုသည်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ?? ငါသိပ်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Linkon မကောင်းတဲ့ခွေး ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ၊ ကျွန်ုပ်မှာ S4 Mini GT-i9195၊ ကျွန်ုပ်မှာ Cyanogenmod 13.0-20160210-NIGHTLY-serranoltexx, Android Version 6.0.1 Mashmellow ကို install လုပ်ပြီး update အသစ်တစ်ခုစီတိုင်းဟာသဟဇာတဖြစ်သောပြန်လည်နာလန်ထူဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မည်သည့် ODIN ကိုသုံးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၎င်းကို PC နှင့်မ flash မချင်းကျွန်ုပ်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး ကသူ့ကိုတူဖြစ်ပျက်?
Linkon Bad Dog သို့ပြန်သွားပါ
ဟဲလိုငါပြန်လည်နာလန်ထူကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့အခါငါဒီပိုစတာကိုရ ... ။ Samsung Galaxy S2 i9100 အတွက် TWRP
Samsung ၏ i9100 Galaxy S2 မော်ဒယ်လ်သည်တရားဝင် TWRP အထောက်အပံ့ကိုဘယ်တော့မျှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ i9100 မှာသီးခြား bootable recovery partition မရှိဘူး။ အဲဒီအစား, သင်သည်သင်၏ ROM ကိုသို့မဟုတ် boot သို့မဟုတ် kernel ကို image ကိုတွင်ထည့်သွင်းသောအရာကိုနှင့်အတူမှီဝဲနေကြသည်။ TWRP, ROMs, Kernels, Boot Image မှာပါတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်သင့် Device အတွက် OmniROM ကိုရှာမယ်ဆိုရင်…။ ငါ့ကိုဘယ်သူမဆိုကူညီနိုင်ရင်ငါအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်။
oswaldo oliveros ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်တွင်တရုတ် terminal တစ်ခုရှိသည်၊ Blu အမှတ်တံဆိပ် Blu Studio one plus ရှိသည်။ ငါ terminal ကိုအမြစ်တွယ်စွာအမြစ်တွယ်စွာ root လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီ terminal အတွက်ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူရှာမတွေ့သေးပါ။ r mediatek MT 6753, ARM cortex a53 processor, 8 cores,
oswaldo oliveros သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် philz (သို့) cwm ရှိသလားဆိုတာမသိရပါဘူး။ ငါ recovery ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါ version ကိုဖော်ပြထားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာရတယ်။
» Philz ထိ 5
ဒီတော့ဘယ် update ကိုတပ်ဆင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး
ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်သင်၏ထုံးစံအတိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမတွေ့ရပါက blu studio m hd ဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy Note3ကို Android Lollipop သို့တရားမဝင်မွမ်းမံနည်း